Iwe Unoda Kukanda Web Data? Semalt Inozivisa Free Web Data Extraction Software
Kuwana mashoko kubva pawebsite ndeye nzira yakaoma inoshandiswa nekambani dzakasiyana-siyana. Misangano inoda kuunganidza mabhuku ezvinyorwa pane zvimwe zvidzidzo inogona kubatsirwa kubva kumapurogiramu anotevera:
Scraper ndeyekuwedzera kwe Chrome kune bhora rakakura rezvinhu. Haisi deta bedzi chete asi izwi rekutsvakurudza. Icho hachisi chinhu chinonyanya kuoma chinogona kutumira mashoko ako kuGoogle Spreadsheets. Dhawenyu yako ichakoporwa uye ichachengetwa mumapapiritsi ayo, nokuda kweOAuth pakuita kuti zviitike. Scraper inofadza kune vese mapurogiramu uye vasina-programmers.
2. Webhuhwi Yekukohwa
. Yakanyorwa muJavajhi uye inounganidza dhenda kubva kune mamwe mawebsite ezvidzidzo uye ezvepamusoro. Kwenyuro yeWebhu inonyanya kukanganisa XML kana HTML-based web pages.
Chirapa chimwezve chinoshamisa data scraping tool . Icho chizere-chinokambaira chinokambaira musimboti ane zvakawanda zvezvikamu uye zvisarudzo. Scrappy inoshanda nekukurumidza uye inokuwanai mafomu ekuda data. Inogona kushandiswa chete kana waisa Python pane imwe yako. Kunyanya, iwe unofanirwa kuva nekunzwisisa kwekutanga kwemurimi wekugadzira.
Kunze ndeimwe yezvirongwa zvakanyanya kudonhedzera uye zvakanyanyobatsira kudhonza. Ndiyo kuwedzera kweFioglefox uye zvinhu zvakawanda zvekutsvaga zvinhu. Outwit inoita kuti web search yako ive nyore uye inobatsira kutarisa pamapeji ewebhu akasiyana-siyana.
Data Toolbar inogona kushandura nzira yekuchera data kuti ugare nyore. Kana uri kutarisa kuunganidza data kubva pamapeji akasiyana ewebhu uye uchida----point, unofanira kuedza Data Toolbar.
Chinhu chakanakisisa cheMacros ndechekuti inogona kugadzirisa kudzoka kwemabasa. Pasinei nokuti unoda kuishandisa muFirafox kana Google Chrome, iMacros inotsigira mapeji ose uye inokubatsira kuti uende kuburikidza nenhamba yakawanda yemapeji ewebhu. Uyezve, inobatsira kushandura mabheji ewebhu uye mazita mumashandisi anobatsira.
Iyi ishanduro-based data yedhakato purogiramu inoshanda seKushandura uye KuInza. io. Google web scraper yakagadzirirwa kubvisa deta kubva kumabhuku maviri uye PDF. Iwe unofanirwa kusimbisa data yaunoda, uye iyi ino ichakupa makopi aunoda muawa. Unogona kuchengeta deta yako kuGoogle Drive.
Extracty isiri itsva asi inoshamisa inoratidzira chirongwa chinoshandiswa nemichina yekudzidza teknolojia. Iwe unogona kuumba APIs nehurongwa uhwu uye unofamba webhusaiti yose mumasekondi Source .